Nezvedu - Guangzhou Red Sunshine Co., Ltd.
Guangzhou Red Sunshine Co., Ltd. haingori nyanzvi inogadzira latex uye nitrile magurovhosi,
asi zvakare vane ruzivo kunze kwenyika kune mamwe magurovhosi ekuchengetedza akadai sematehwe magurovhosi, magurovhosi ekotoni,
rmagurovhosi akavharwa neubber,PVC magirovhosi eindasitiri, magurovhosi anoraswa.
Mafekitari edu ari muguta reFoshan, mudunhu reGuangdong akavambwa muna 2006. Inofukidza nzvimbo inopfuura 12000 square metres, ine mitsara mitatu yekugadzira otomatiki yemagurovhosi elatex uye magirovhosi enitrile, huwandu hwekugadzira hwepamwedzi hunogona kudarika 3,000,000pairs.Yakaona maawa makumi maviri nemana achimhanya pasina kumira, nemapoka matatu evashandi achishanda achichinjana.Muna 2019, takaunza michina mitsva uye tekinoroji, kushanda nesimba kwakawedzera kuvandudzwa.Tine rabhoritari imwe uye 3 vane ruzivo matekiniki ekugadzira zvigadzirwa zvitsva nekuvandudza zvigadzirwa zvekare.
Zvizhinji zvinowanzoshandiswa magirovhosi zvinhu:
(1) Wire - yakajairika Stainless steel waya, asiwo chromium alloy waya, inonyanya kushandiswa kugadzira magirovhosi asingachinjiki. Rudzi urwu rwezvinhu zvine simba rakachekwa rekudzivirira uye riri nyore kuchenesa, asi rinorema uye harina kunaka kushandisa.
(2) nitrile (ine machira emucheka)- ine anti-kupfeka uye anti-kubaya zvivakwa, inochinjika uye yakasununguka kushandisa.
(3) natural latex (ine machira lining) - yakanaka elasticity, kunyanya kuchinjika, ine kumwe kupfeka kuramba, kuramba kubvarura uye kucheka kuramba.
(4) PVC (ine machira emucheka) - inogona kupa imwe kupfeka uye Pierce dziviriro, kana zvinhu zvakakora, asi zvakare inogona kuve nekumwe kucheka kuramba, asi kwete kubvarura kuramba.
(5) Dehwe - zvinhu zvechisikigo, kuburikidza nemhando dzakasiyana-siyana dzekutsvaira, dzine zvinhu zvakasiyana-siyana.Leather inogona kupatsanurwa kuva: dehwe remombe, iro rine zvakanakira kugadzikana, kusimba, kufema uye kusapfeka.Mushure mekugadzirwa kwechromium, inogara yakasimba uye inogona kuramba tembiricha yakakwira; Ganda renguruve, pore ihombe, kupindirana ndiko kwakanyanya, mushure mekugezwa kunogona kuramba kupfava kwakanaka, asi kwete kuoma; Dehwe remakwai, ndiro rinonyanya kugadzikana, rakasimba uye rinopesana. -Kupfeka kuita kwezvakanakisa.